Raha mpamorona votoaty miasa amin'ny indostrian'ny fahitalavitra ianao, dia tsy mahagaga raha milaza ny fomba lehibe amin'ny marika sy ny mpihaino zarainao izany. Ny mpamorona atiny amin'ny indostrian'ny fahitalavitra dia manana tantara holazaina, ary ny votoatin'ny sary noforonin'izy ireo dia fiara tonga lafatra amin'ny fizarana izany traikefa amin'ny mpihaino kendrena izany. Ahoana kosa raha ny mpampielezam-peo no afaka manao ny tantaran'izy ireo bebe kokoa ho an'ireo mpihaino azy ireo? Ahoana raha afaka mitondra azy ireo bebe kokoa izy ireo? Eny, izay no eo Vizrt tonga eo amin'ny sary sy ny Virtual Studio no fitaovana tonga lafatra amin'ny fanaovana traikefa ara-tantara amin'ny tantaran'izy ireo izay tena zava-dehibe ho an'ny mpihaino azy.
Viz Virtual Studio miombona amin'ny mpamatsy fanaraha-maso rehetra, izay manome fahafaha-miasa tanteraka amin'ny fampiasana sary fitomboan'ny zava-misy any amin'ny tontolo manodidina. Midika izany fa ny fakana sary iraisan'i Viz Virtual Studio dia azo ampiasaina amin'ny tontolo ivelany, ary miaraka amin'ny fitomboan'ny vokatra ivelany (fitrandrahana ny fifidianana ary famokarana fanatanjahantena velona) dia azo atao mitovy amin'ny studio.
Nahoana no misafidy VizrtVahaolana ara-tantara amin'ny Virtual
Ny tantara dia efa lasa taloha ary ny mpamorona atiny rehetra dia manana tantara holazaina. Ho an'ireo mpampita vaovao, Vizrt afaka manampy amin'ny fanomezana tsara kokoa ny tantaran'izy ireo. Noho ny fivoaran'ny zava-misy vaovao sy ny seho Virtual, ny Virtual Studio Virtual dia miasa ho fitaovana tonga lafatra ho an'ny mpampita ny mpanao ny tantarany mba hahavita ny tantarany.
fampitana fampitana injeniera fampitana Engineering fampitana orinasa Content Creator Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor rafitra fanaraha-maso mifototra amin'ny sary fampidirana mpamorona votoaty media NewTek Vola famaranana ao Nordic VIII vahaolana miorina amin'ny rindrambaiko Spears & Arrows automation studio Ultra HD Forum Video injeniera Virtual Studio tantara an-tsary Viz Virtual Studio Vizrt 2020-05-05